Qarax ka dhacay degmada Diinsoor & khasaaro ka dhahay | SMC
Home WARARKA MAANTA Qarax ka dhacay degmada Diinsoor & khasaaro ka dhahay
Qaraxa oo ahaa miinada meelaha fofog laga hago ayaa waxaa uu ka dhacay goob maqaaxi ah oo ku taal degmada diinsoor ee Gobolka Baay, waxaana ka dhashay khasaaro kala duwan.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in qaraxa Miino la dhigay Geed ku yaal Maqaaxida oo xilliga qaraxa uu dhacayay ay ku sugnaayeen Ciidamo iyo dad Shacab ah oo ku shaaheeynayay.
Inta la xaqiijiyay qaraxa ayaa waxaa ku dhaawacmay 5 Ruux oo kala ah Haweeneyda Maqaaxida leh, laba askar, Guddoomiye laameedkii hore ee xaafada Waaberi ee degmada Diinsoor iyo Cunug aad u yar.
Ciidamo ka tirsan kuwa Saldhiga Booliska degmada Diinsoor ayaa tegay halka qaraxa uu ka dhacay, iyaga oo sameeyay howlgal ay ku baadi goobayeen dadkii ka dambeeyay qaraxa wallow aysan jirin dad loo qabtay.
Dadka degmada Diinsoor ayaa gurmad u sameeyay dadka ku waxyeeloobay qaraxa, waxaana la geeyay Isbitaalka degmada diinsoor si loogu daweeyo.
Qaraxa Maanta ka dhacay degmada Diinsoor ee Gobolka Baay ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli shalay Ciidamada dowladda & kuwa Koonfur Galbeed ay howlgal ay ka sameeyeen degaanka saaydhaaleen la sheegay inay ku dileen 7 Xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab.
Previous articlelaftagareen oo dib ugu laabtay Baydhabo kana hadlay dagaalka Al-Shabaab
Next articleKenya oo soo dhoweysay warbixintii IGAD ka soo saartay khilaafka kala dhexeeya Somalia